I-American Alsatian - Inja Emnene Noma Eyonakalisayo? - Izinhlobo
I-American Alsatian - Inja Emnene Noma Eyonakalisayo?
Okokuqala kwabhaliswa ngumfuyi uLois Scwarz ngawo-1980, i-American Alsatian, eyaduma ngokufana kwayo okukhangayo ne-Dire Wolves kusuka ku-Game of Thrones, iwuhlobo olukhulu lwenja.
Zibabazekayo, zizolile futhi zikhululekile ngobumnene bokuqina namandla aphansi, lezi zinhlobo ezinkulu zezinja zazalelwa ngokukhethekile njengezilwane ezihambisana nomndeni ezinempilo enhle.
Njengoba kunemithetho yokuziphatha komfuyi, ukuhlolwa kobumnene kanye nezidingo eziqinile zokuphila isikhathi eside kohlobo, akumangazi ukuthi le nja ingenye ezinzile, ezilungele futhi izinhlobo ezinkulu ezithembekile ezizungezile .
Unentshisekelo yokufunda okwengeziwe ngalesi sibindi, kepha, ungalokothi ube nobutha be-canine?
Kulesi sihloko sizohlola imvelaphi ye-American Alsatian, isimo sabo nokuthi kudingani ukunakekela lezi zinja ezihlaba umxhwele ezifana nezimpisi usuku nosuku.
I-American Alsatian Info Table
Usayizi Okukhulu - Abesilisa basukela kuma-28 kuye kuma-33 ″ nabesifazane bangu-26-30 ″
Isisindo Ngaphezulu kwamakhilogremu we-100 kwabesilisa nama-90 kwabesifazane
Isikhathi sokuphila Iminyaka engu-12 kuya kwengu-15
Uhlobo Lokuzala Okuhlanzekile
Inhloso Inja engumngane
Ifanele i- Abangashadile, imibhangqwana, nemindeni enezinja ezinkulu ezizalanayo
Ukuhluka Kwemibala Isiliva, igolide, umbala omthathu, omnyama noma ukhilimu
Isimo Ukuzethemba, ukulungela, isibindi, isexwayiso, umoya ophansi, ubumnene futhi uqotho
Amanye Amagama Izinja zeSchwarz, i-Alsatian Shepalute
Yini i-American Alsatian Dog?
Umlando wase-American Alsatian
Abafuyi Bama-American Alsatian
Isimo Sase-American Alsatian
Ukunakekela i-American Alsatian
Kufanele Uyondle Kangakanani Le Nja
Ngabe Ukuvivinya Kangakanani Lokhu Kudinga I-Alsatian?
Uluqeqesha Kanjani Lo Mhlobo?
Ukubukeka kwe-American Alsatian
Usayizi we-American Alsatian
Isizukulwane sokuqala sama-Alsatia sakhuliswa ngabelusi baseJalimane nabakwaMalamute.
Le yinja ehlanzekile ehlangene eqale ukubonwa ngo-1987. Lezi zidlakela ezinomusa zazalelwa ngokukhethekile ukuba zibe ngumndeni ophelele.
Yize bengakaqashelwa yinoma iyiphi iKennel Club enkulu, banayo iNational American Alsatian's Breeders 'Association yabo, futhi izindlu zokugcina izinja zokukhiqiza le nja engenacala isekhona.
Ngo-1987 kwaba ukuqala kohlelo lwe-Dire Wolf Project. ULois Scwarz (owayenguDenny ngaleso sikhathi), wakhiqiza udoti wokuqala wemidlwane yaseMelika ngokuhlanganisa i-Alaskan Malamute noMalusi waseJalimane.
ILois, inentshisekelo yokukhiqiza inja ephethe imikhuba emihle, ezinzile iminyaka eminingana, yakha indinganiso yokuzalanisa engqondweni yayo.
Ucezu lokuqala lwephazili kwakunguMalusi waseJalimane uwele uMalamute. Isizukulwane sokuqala sasizobizwa ngokuthi yi-Alsatian Shepalute.
Eminyakeni embalwa eyalandela, uLois wakhiqiza umugqa ofanayo wobumnene, kepha, wayekhathazekile ngokuthi izinja zakhe zazibukeka zifana kakhulu noMalusi waseJalimane ngokubukeka. Wabe esenquma ukuzala inzalo yakhe ngama-Mastiffs amaNgisi, ukuthuthukisa ngokwengeziwe usayizi nesiqu sohlobo lwakhe oluphelele.
Futhi, lezi zinja zazalelwa ubumnene nokuzinza. Ngo-2002, uLois wengeza ezinye izingxube ze-Anatolian / Great Pyrenees kwi-Shepherd x Malamute Mix yakhe.
Manje njengamanje, le nja isesizukulwaneni sayo sesihlanu selokhu yazala okokugcina, iyinikeza uhlobo olumsulwa futhi.
Khumbula igama lephrojekthi kaLois ... iDire Wolf Project?
Impisi Eqondisayo ( osekuphele isikhathi eside ) wayeyisihlobo esiseduze seGrey Wolf, ithemba lale nja kwakufana nokufana ne-Dire Wolf kepha konke okuguqukayo, okuthambile isimilo esihle senja efuyiwe .
Ngomlando wayo wokuzala, le nja ibinamagama amaningi:
Ngo-1988, yaziwa ngokuthi yiNorth American Shepalute
Ngo-2004, yaziwa ngokuthi yi-Alsatian Shepalute
Ekugcineni ngo-2010, i-American Alsatian yathola igama esilaziyo njengamanje
I-Dire Wolf manje isinyamalele, kepha, ukuvela kwe-Alsatian kwakususelwe kulesi silwane
Njengoba sishilo, isibaya semvelaphi sisekhona, futhi le pooch inenhlangano yayo yokuzalanisa. Ngalesi sizathu, ukuthola umfuyi ohloniphekile kulula.
Abazalisi enhlanganweni bazalela kuphela impilo kanye nalokhu kuthula kwengqondo; ungalindela ukukhokha ngaphezulu kwe- $ 2000 USD ngomdlwane wase-American Alsatian.
I-American Alsatian yazalelwa ukuba ibe nokuzola, imikhuba emnene futhi ivumelane nokuphila kwanamuhla. Izinja ezikhombise amahloni , ukungasebenzi kahle, ukukhonkotha ngokweqile noma yiziphi izimpawu zokuhlukunyezwa azifakwanga echibini lokuzalela.
Lesi sidlakela esimnene siyazethemba futhi asesabi, sizinzile futhi siyabikezela. I- uhlobo olukhulu oluphelele lomndeni ohloniphayo abaziqondayo izidingo zakhe.
Akuyona inja yokugada, ingumngane wayo; bathanda ukuhlala nomndeni wabo futhi uma behlangana kahle kusukela ebusheni ngokuvamile bazobekezelela abantu nezilwane zabo bonke ubujamo nobukhulu.
Ungalenzi iphutha ngisho nentukuthelo yabo ngokuba i-push over; yizinja ezinkulu, ezinamandla futhi izingane kufanele zibambe iqhaza ekuqeqesheni nasekusebenzeni nabantu; ukubanika isikhala lapho kudingeka.
Njengoba uphansi phambili kwamandla, lokhu kumane nje kuyisibonakaliso sobuntu babo, imidlwane isencane futhi iyakuthanda ukudlala. Ngaphandle egcekeni noma ehlathini, imizuzu engama-60 yokuzivocavoca ijwayelekile kulaba bafana; ukuzigcina zinelisekile futhi zivuselelwe; hhayi njengabo asebenzayo Shiloh Shepherd umzala .
Abadume ngokuba ngama-hyperactive, ama-barker ngokweqile noma ama-strung kakhulu, uma ngabe kukhona kwalokhu kuziphatha okuvela kubheka noma yiziphi izindaba zezempilo nodokotela wezilwane bese ukhuluma nomuntu oziphatha ngendlela engcono yokuqhubekela phambili.
Njengoba ibekiwe emuva, ngaphandle, le nja ibizobonakala kulula ukuyinakekela, kepha, kusadingeka ukuthi zihlangane, ziqeqeshwe, zilungiswe futhi zondliwe!
Ukuqonda izidingo zalo mlingani kuzoqinisekisa ukuthi ukhulisa inja eyindilinga, ezinzile.
Umsunguli weBreed, uLois Schwarz, uphakamisa ukuthi njengemidlwane lezi zinja kufanele zondliwe kathathu noma kane ngosuku. Uma uvuthwe ngokuphelele, lokhu kuvame ukwehlisa ukudla okubili ngosuku.
Ukudla kwamahhala kufanele kugwenywe ngoba kungasiza ekudliseni ngokweqile, futhi kwaziwa kahle ukuthi ukondliwa ngokweqile kuyalimaza ukukhula kwamathambo izinhlobo ezinkulu; kanye namazinga we-calcium anganele.
Lapho inja idla amakhalori amaningi kakhulu, afaka amaprotheni amaningi, iba nomphumela wokukhula kwamathambo ngokushesha. Lokhu kukhula kwamathambo okusheshayo kwandisa ukulungiswa kabusha okufaka isandla ukukhubazeka kwesakhiwo ngaphakathi kwethambo . Lokhu kubangela izingqinamba zamathambo kamuva empilweni.
Iseluleko sethu ukuthi sengeze izinja ezinkulu ezizalisayo ezine-calcium.
Ngokuvamile, ukudla komdlwane wakho kufanele kufake phakathi kwama-4.4-5.6 amagremu wamaprotheni ngekhilogremu ngalinye lesisindo somzimba kanye no-2.7 amagremu wamafutha ngekhilogremu ngayinye yesisindo somzimba. Lokhu incipha cishe ngama-75% uma isivuthiwe .
Xoxa nganoma imiphi imibuzo ephathelene nokudla okunempilo nodokotela wezilwane ofanelekayo.
Njengoba sishilo, i-American Alsatian iyinja enamandla amancane, lokhu akusho ukuthi abakuthokozeli ukuhamba kwabo. Ukuzivocavoca imizuzu engama-60 ngosuku kuzogcina le nja inelisekile kakhulu.
Unobuhlakani futhi uqaphile, uqeqeshwa ngendlela eyisimanga, ukukhumbula bekungeke kube yisizathu ubuzomgcina eqinile ; kuzoba usayizi wakhe. Khumbula ukuthi abanye abantu bangesatshiswa yizinja ezinkulu, ngakho-ke cabanga ngalokhu lapho uhamba uhamba.
Siyazi ukuthi izinhlobo ezinkulu zithambekele kakhulu ezimweni ezinjenge-hip dysplasia ngenxa yokukhula kwazo ngokushesha. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukugcina imidlwane kude nezitebhisi futhi ukuvumela isikhathi esifushane kuphela sokuzivocavoca nge-leash endaweni ethambile kunganciphisa amathuba okuthuthuka kwalesi simo.
Lapho isikhule ngokugcwele, le pooch enokuzethemba izokhuphuka ngenjabulo izintaba noma yehle ipaki yezinja. Futhi bakhetha ukudlala egcekeni labo. Ngenxa yobukhulu bazo, ziyachuma ekhaya elikhudlwana.
Siyazi ukuthi izinja zisabela kahle ekuqinisweni okuhle nokuvuza ukuqeqeshwa kwezinja , i-American Alsatian ayihlukile.
Banokuthula, baphapheme futhi bahlakaniphile, okubenza baphendule futhi baqeqeshwe kakhulu. Ukugcina lokhu kuziphatha, gwema ukusebenzisa isijeziso ngesikhathi sokuqeqeshwa; Siyazi ukuthi isijeziso siholela ekuhlukunyezweni nasekucindezelekeni okubangela izingqinamba zezempilo nezokuziphatha enjeni yakho.
Lapho eziphethe ngendlela ofuna ngayo, mncome futhi umvuze ngayo okunye ukudla okunempilo okuphephile kwenja .
Uma ufuna isigebenga esinemikhuba emihle, emnene udinga ukuzihlanganisa naye kusukela usemncane. Ngendlela ephephile, elawulwayo, wethule abantu abahlukene, izindawo, imisindo nemicimbi.
Qondanisa ukuzola kwakhe; athuthukise inqubo ehambisanayo futhi umnike isikhathi nokubekezela ukuze asebenze ekuqeqesheni nasekusebenzeni nabantu.
Ngaphandle kokubhekelwa okukhulu ekuzalaneni kwesitokwe kanye nohlu lwezivivinyo zezempilo olwenziwe, kusenezinkinga ezithile zezempilo.
Akumangalisi ukuthi kube phezulu ohlwini, njengazo zonke izinja ezinkulu zokuzalela i-hip ne-elbow dysplasia. Abafuyi ababhaliswe neNational American Alsatian Breeder's Association kumele bachofoze futhi babeke indololwana ngesitoko sabo, kodwa-ke, kuyaziwa ukuthi abazali abazuze kahle basengaba nomdlwane othi kamuva uthuthukise i-hip kanye / noma i-elplasia dysplasia.
Njengamanje, kubikwe yinhlangano yokuzalanisa ukuthi ayikho i-dysplasia yesinqe noma indololwane kunoma yimuphi ulayini ngalesi sikhathi.
I-Panosteitis ngesinye isimo esivamile ezinjeni ezikhula ngokushesha, yilapho kulapho kukhona ukuvuvukala emathanjeni emilenze. Lokhu okuvame kakhulu ku-German Shepherds .
Olunye udaba oluhlobene nethambo, i-Arthritis ingahlala ihambisana ne-dysplasia ngenxa yokuhlikihla ngaphakathi kwejoyinti.
Ekugcineni, ezinye zalezi zinja kubikwa ukuthi zinesifo sokuwa okuwukuqhuma okungalawuleki kwemisebenzi kagesi ebuchosheni ezethula njengokuthunjwa .
Zonke lezi zinja, lapho zihlanzekile, kufanele zifike nokuhlolwa kwe-DNA kuzo zonke izifo ezitholakala njengefa ezihlolwa kalula.
Isikhathi sokuphila saseMelika i-Alsatian
I-Alsatian enempilo necocekile izoba nempilo ephakathi kweminyaka eyi-12 kuya kwengu-15 ngokuya ngosayizi wabo nobulili babo .
UDire Wolves (osesithombeni ngenhla) kwaba ugqozi lokuvela kwale nja.
ULois, umfuyi wokuqala, uhlala engajabule ngokubukeka, kepha, wayehlala njalo ethembekile ekuzaleni ubumnene nobuntu ngaphambi kokubukeka.
Ngomzamo wokufana ne-Dire Wolf, umbala othandwayo we-Alsatian yiSilver Wolf Grey. Noma kunjalo kungenzeka ukuthola imidlwane eyimpisi yegolide iGrey, emnyama noma ukhilimu.
Ijazi labo liyakhasa futhi liyajiya ezinyangeni zasebusika, kepha linciphile futhi lifushane ezinyangeni zasehlobo. Baziqhayisa ngejazi eliphindwe kabili elihlala kabili ngonyaka.
Ukuxubha njalo kuzogcina ingubo yakhe isesimweni esiphakeme.
Banamandla futhi banemisipha, ngaphansi kwazo zonke lezo zinwele, umbono ohlaba umxhwele ngempela!
Le nja ime ibanzi futhi iyahlaba umxhwele. Ngenxa yamathambo abo amakhulu angabonakala emakhulu kunalokho ayikho. Abesilisa kufanele babe nesisindo esingaphansi kuka-100lbs nabesifazane abangaphansi kwama-90lbs. Ekubuneni, abesilisa bazosukuma bafike ku-33 ”bese kuthi abesifazane bafinyelele ku-30”.
I-American Alsatian yazalelwa ukuzethemba, ukuzola nokuqapha.
Isiqu sazo esikhulu akumele sisabise, zinamandla kodwa ziyabikezelwa.
Bazinikele ngenhliziyo yonke emndenini wabo, kodwa inja yokubuka imfucumfucu, ngeke uzwe ubudlelwano obuhle Amagxolo aseMelika e-Alsatian.
Ubuhlakani babo nemvelo yabo yokufuna ukwazi kusho ukuthi baqeqeshwe kakhulu; ukuhlinzeka ngezikhathi zakho zokuqeqeshwa ezimfushane kugcwele ukuqiniswa okuhle nomvuzo.
Kubekwe njengamandla aphansi, lokhu kumane kungenxa yokuthi ukukhiqizwa kokungasebenzi kahle kuphuma ngaphandle, i-American Alsatian yakho izothanda ukuhamba kwayo futhi ilungele kangcono ikhaya elikhulu elinegceke lakhe.
USchwarz Kennels ukubeka ngokusobala ukuthi 'izinja zeSchwarz akuzona izinja ezisebenzayo!' Lokhu bekungeke kube yiqiniso ngokwengeziwe - u-Alsatian okhuliswe kahle, oqeqeshiwe futhi onobudlelwano uyisiqhwaga esimnene futhi ungumngane wokuphila.
Inja Yegama Lenja (Amagama Angaphezu Kwe-10,000)
i-german Shepherd lab mix mix temperament
amagama amahle wamalebhu eshokoledi
poodle futhi shih tzu imidlwane exubile
uhlu lwe-pitbull uhlu olunezithombe
intengo ebomvu yeminwe yemidlwane
Umxube we-blue merle collie austria wase-Australia